यौनसम्पर्क गर्दा महिलाहरु किन निकाल्छन् आवाज ? जानी राखौ – Idea Khabar
यौनसम्पर्क गर्दा महिलाहरु किन निकाल्छन् आवाज ? जानी राखौ
आइडिया खबर२०७६ कार्तिक ४, सोमबार १९:२४
केही महिलाहरु सम्भोगको दौरान किन आवाज निकाल्छन् ? यदि यो प्रश्न महिलाहरुलाई सोधियो भने प्रष्ट छ– उनीहरु जवाफ दिन पन्छिनेछन् । हुनसक्छ, कसैले एकथरि भन्ला, अर्कोले अर्कोथरि । तर, यो यस्तो जिज्ञाशा हो जसको उत्तर खोज्न जोसुकैलाई कौतुहलता जागिरहन्छ ।
यसबाहेक इन्टरनेटमा अपलोड भइरहेका असंख्य पोर्न भिडियोको अर्काइभ हेर्दा पनि त्यहाँ महिला धेरै आवाज दिइरहेको देख्न पाइन्छ । भलै त्यो रियल आवाज भने हुँदैन । त्यस्ता साइटहरु हेर्नेहरुमा अप्रत्यक्ष रुपमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव परिसकेको हुन्छ, अनि आफ्नो यौनक्रियामा त्यो देखाउन चाहन्छन् । सेक्सको दौरानमा यस्तो ‘बोल्ड’ पन ‘हेट्रोसेक्सुअल’ महिलामा बढी देखिने गरेको अनुसन्धान देखाएको छ । एजेन्सीको सहयोगमा